Govinda waa soo dhigtay wuxuu rabaa saaxiibkiis Amitabh inuu la dagaalo: RANGEELA RAJA Vs THUGS OF HINDOSTAN – Filimside.net
‘Chote Miyan’ Govinda Vs ‘Bade Miyan’ Amitabh Bachchan: Micnaha labada saaxiibada ah Govinda iyo Amitabh Bachchan ee isla sameeyeen filimkii Classic ahaa ee HIT-ka weyn noqday Bade Miyan Chote Miyan ayaa hadda diyaar u ah inay Boxoffice-ka ku hardamaan.
Govinda ayaa shaaca ka qaaday filimka uu kusoo laabanayo ee uu labada door ku jilaayo Rangeela Raja la daawan doono feestada Diwali 2018 oo ku beegan 8 November waxayna isku dhacayaan markaas Amitabh Bachchan iyo Aamir Khan filimkooda weyn Thugs Of Hindostan oo horey u calaameestay feestada Diwali inuu masraxyada qabsado.
Ruug cadaa Pahlaj Nihalani oo filimka Rangeela Raja Govinda u maal galinaayo wuxuu yiri “Waa wax sahlan, marka filim weyn xiliga feestada la saaro waxaa jirto fursad kale oo filimada yar yar lagu daawan karo. Sidaa darteed kuwa aaminsanaa in Thugs Of Hinduston kaligiis Diwali la daawanayo ha ogaadaan inuu jiro dooq labaad oo daawadayaasha heli karaan xiliga feestada weyn waana filimkeyga Rangeela Raja.”
Soo saare Pahlaj Nihalani wuxuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay “Haddii aad daawateen Govinda iyo Amitabh oo isla socdaan filimkii Bade Miyan Chote Miyan guulna isla gaareen 20-sano kadib waxaad arki doontaan Govinda iyo Amitabh oo kala dhinac ah balse guusha isla wada qaadan doonaan.”
Waxaan rajeyneynaa hadalka Pahlaj Nihalani inu run noqdo oo uu Govinda soo laabasho weyn ku sameeyo filimka Rangeela Raja halka Amitabh iyo Aamir Khan filimkooda Thugs Of Hinduston guushiisa cidna shaki galin karin madaama uu yahay filimka ugu weyn 2018 Bollywood-ka sameeyaan.